Single Deck Blackjack 🔴🖤 Iwu & Esemokwu - 429jp.info
Agaghị agọnahụ na onye ọ bụla nwere ike ịchọta ezigbo blackjack. Otu n’ime ha bụ otu ihe na-acha ọcha blackjack. Dị ka aha ya na-egosi, ọ na-akpọ naanị otu kaadị nke kaadị.
Na otu oche blackjack, isi ọrụ nke onye ọkpụkpọ ahụ bụ otu ihe ahụ na ụdị egwuregwu ndị ọzọ. Ebumnuche bụ ịnara kaadị ndị bara uru karịa akara aka onye na-ere ahịa. Ezigbo ngụkọta bụ isi 21. Mana ọnụọgụgụ isi a ekwesịghị ịbụ ihe karịrị 21. Ọ bụrụ na nke a emee, onye ọkpụkpọ na-efunahụ ya na akpaghị aka. Ọ dị mfe dị ka nke ahụ.
Ka-esi n’ime ụfọdụ nkọwa ndị ọzọ nke otú egwuregwu na-akpọ si na uru & ọghọm nke igwu egwu na naanị otu oche. Ọzọkwa, dị njikere ịlele oge otu Single Deck site na SlotLady iji hụ otu o si arụ ọrụ:
Etu esi egwu Blackjack Deck Blackjack
Ga-achọpụta n’ime ntuziaka a na otu blackjack dị n’ịntanetị dị na ụdị ntanetị ndị ọzọ. Mana enwere ụfọdụ ihe mere ka ọ pụọ iche. Dịka ọmụmaatụ, ọ ga-abụrịrị na a ga-enye gị kaadị nke otu ọkwa (dịka ọmụmaatụ, Queen-Queen), dịka na, dịka ọmụmaatụ, blackjack-deck blackjack.
Ọzọkwa, dabere n’otú esiri gbasaa oche ahụ, ị ​​ga-enwe ọkwa ịga nke ọma dị iche na ịgụta kaadi. Ọ bụrụ n’ịmụta etu esi agụta otu ihe eji egwu mmiri otu, ị ga-ahụ ụfọdụ uru na ọghọm ya. N’aka nke aka, kaadi counters anoghi ichere ihe dika oge iji nweta onu ogugu. N’aka nke ọzọ, enwere ike ịmachi oche ahụ mgbe ọ bụla gbara ya gburugburu.
Saịtị ịgba chaa chaa n’ịntanetị na-enye gị ohere igwu egwu aka ise n’otu oge. Ya mere, ọsọ nke egwuregwu ahụ na-abawanye nke ukwuu, ndị egwuregwu nwere ike ịnweta ego karịa (n’ezie, ọ bụrụ na ha jikwaa iji nweta mmeri na-agbanwe agbanwe). Maka ndị mbido, agbanyeghị, anyị na-akwado igwu naanị otu aka. Ma ọ bụghị ya, ị nwere ike ịda mbà.
Baskpụrụ Ndị Bụ Isi
Anyị achọpụtaworị na ịkwesịrị ị nweta uru aka dị elu karịa nke onye na-ere ahịa na-enweghị nkwụsị. Maka nkọwa, aka aka bụ nchikota nke ụkpụrụ kaadị. Nke a bụ ihe ị kwesịrị ịma banyere ụkpụrụ kaadị:
Kaadị 2 ruo 10 dị oke ọnụ ahịa dị ka uru pipụ ha. Uru kaadị kaadi (Jack, Queen, na King) bụ ihe 10. Ace bụ 1 ma ọ bụ 11. Aka kachasị mma bụ Ace gbakwunyere kaadị ihu ma ọ bụ 10 , nke na-enye gị kaadi kaadị abụọ maka ngụkọta nke ihe 21. Ọ bụrụ na ịmee gị blackjack, ị ga-emeri otu ugboro na ọkara nke nzọ gị.
Nke a bụ ihe ị kwesịrị ịma banyere usoro egwuregwu:
Tupu onye ọ bụla aga, ndị egwuregwu ahụ na-etinye nzọ ha. Onye na-ere ahịa na-eche otu kaadị ihu na ihu onye ọkpụkpọ ọ bụla na otu ihu ihu ala na onwe ha. Ha mechaa, ha enye mmadụ kaadị nke abụọ onye ọ bụla ga-ahụ. Ha ajụọ onye ọ bụla na-agba chaa chaa na tebụl, malite na nke dị n’aka ekpe ya, ma ha chọrọ kaadị ndị ọzọ. Ndị na-egwu egwu nwere ike ịrịọ kaadị ole ha chọrọ. Ozugbo ndị egwuregwu niile nyere ha kaadị, onye na-ere ahịa na-adọta kaadị ma ọ bụrụhaala na ngụkọta erughị 17. Ọ bụrụ na onye na-ere ahịa enweta akara aka karịa 21, ndị egwuregwu niile na-enweghị enwe mmeri. Ọ bụrụ na akara ahụ dị n’agbata 17 na 21, ndị egwuregwu niile nwere nnukwu ngụkọta mmeri. Ọ bụrụ na agbakwunye onye ọkpụkpọ na onye na-ere ahịa, ha ga-enweta nzọ ha.
Dabere na onye na-ere ahia na-eguzo ma ọ bụ na-ada na 17 dị nro, ị ga-eme mgbanwe ole na ole na otu usoro blackjack gị. Iji ghọta usoro ndị a nke ọma, ị nwere ike ile tebụl pụrụ iche nke ga – agwa gị gbasara ịgagharị ọ bụla n’oge egwuregwu ahụ.
Uru na ụkọ ihe ụfọdụ nke Single Deck Blackjack
Single dekk blackjack bụ ụdị kpochapụwo nke blackjack adịla kemgbe ọtụtụ narị afọ. Varietydị a nwere ọtụtụ uru:
Otu ogwe aka blackjack ga-akacha mma. Igha ihu n ’ihu 0.15% ihu ga – eme ka ị nọrọ ebe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ egwuregwu ịgba cha cha ma ọ bụrụ na igwu egwu zuru oke. Egwuregwu ahụ dị egwu ma na-atọkwa ụtọ. Otu ọnụọgụ ọnụọgụ blackjack na-agụ usoro dị mfe ịgbaso.
Dabere na uru ndị a, ị gaghị eche na ọ ga-abụ ọtụtụ ihe dị njọ na otu blackjack. Agbanyeghị, enwere ụfọdụ ọghọm ị kwesịrị ịma gbasara:
Enwere ike ịnwe iwu na-adịghị mma nke na-eme ka ọnụ ụlọ dịkwuo elu. Ọ ga-abụrịrị na ị gaghị enweta ọtụtụ comps na ụdị egwuregwu a. Enwere ike ịgbanwegharị oche ahụ ọtụtụ oge, nke nwere ike igbochi ịgụta kaadi dị mma.
Ọ bụrụ n’itabeghị egwuri egwu otu blackjack na ntanetị, ọ ga – abụ ihe dị mma inye ya ohere. Nwere ike iri uru nke ọnụ ala dị ala nke cha cha yana ịme usoro atụmatụ kaadị dị irè. Na njedebe nke ụbọchị, ụdị blackjack ọ bụla bara uru ịnwale n’ihi na ị nwere ike ịchọpụta ọtụtụ nnukwu aha.
Na CasinoChan, ị ga-emecha ohere igwu egwu otu egwuregwu blackjack n’ịntanetị ma bulie bankroll gị site na iji usoro dị iche iche. Mgbe ị mụtachara ikike igwu egwu otu oche blackjack, ị nwere ike ịgbanwe egwuregwu cha cha ndị ọzọ na-atọ ụtọ. Katalọgụ anyị jupụtara na gboo yana akụ bara ụba ị hụbeghị.